Ny fitrandrahana ny faritr'i Pattaya dia namporisihan'ny Ben'ny tanàna hanatsara ny fizahan-tany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Ny fitrandrahana ny faritr'i Pattaya dia namporisihan'ny Ben'ny tanàna hanatsara ny fizahan-tany
Bubble azo antoka quarantine ny faritra Pattaya
Pattaya City dia manolo-kevitra hotendrena ho toy ny bubble azo antoka hahafahana manosika ny fizahan-tany hisongadina sy hanokatra ny varavarany avy amin'ny hidin'i COVID-19.
Chon Buri dia faritany Thai miorina amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Helodrano Thailand izay feno torapasika malaza, anisan'izany i Pattaya, tanàna fialantsasatra efa hatry ny ela.
Ny ben'ny tanànan'i Pattaya dia maniry ny hanaovana vaksiny ireo mpandraharaha sy mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany mba hahazoan'ny tanàna ny anarana hoe "quarantine".
Ny fandefasana vaksiny voalohany dia ho tonga any Thailandy avy any Shina amin'ity herinandro ity, ary i Chon Buri dia iray amin'ireo faritany voalohany nandray azy ireo.
Nilaza ny ben'ny tanànan'i Pattaya, Sonthaya Khunpluem, fa anisan'ireo faritany voalohany nahazo vaksinin'ny COVID-19 i Chonburi, ary izany dia hampiorina ny fahatokisan'ny olona eo an-toerana sy ny mpitsidika ao Pattaya ho toerana fizahan-tany.
A Karakarain'ny faritra Pattaya dia resahina ao anaty tolo-kevitra iray hotendrena ho toy ny bubble azo antoka hampisondrotra ny sehatry ny fizahan-tany. Nilaza ny Ben'ny tanàna fa tiany hatao vaksiny ireo mpandraharaha sy mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany hahafahan'ny tanànan'i Pattaya mahazo izany fanondroana izany.
Chon Buri dia faritany Thailandy iray izay hita eo amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Helodrano Thailandy. Any atsimon'ny renivohi-paritany, antsoina koa hoe Chon Buri, ny morontsiraka dia tototry ny morontsiraka be mpitia, anisan'izany i Pattaya, tanàna fizahan-tany mpizahatany efa hatry ny ela, misy fidirana an-dranomasina, toeram-pisakafoanana, toeram-pivarotana ary faritra misy ny fiainana andavan'andro izay misy litera kely bara sy cabaret cabaret.
Chon Buri dia nanana maro an'isa Areti-mifindra COVID-19 amin'ny fihodinana faharoa amin'ny areti-mandringana ary notondroina ho "faritra mena" hifehezana faran'izay betsaka. Ny zon dia nahena ho "voasary" na faritra voafetra.
Rehefa vonona dia hatolotra ny Ivon-toerana misahana ny fitantanana ny toe-javatra COVID-19 (CCSA) ny tolo-kevitra hodinihina, hoy ny Ben'ny tanàna Sonthaya, ary nilaza fa faly izy fa ny CCSA tamin'ny alatsinainy nanendry an'i Chon Buri indray ho "faritra mavo", faritra iray eo ambany fanaraha-maso akaiky izay ampahan'ny Pattaya. Nilaza izy fa izany dia vokatry ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny ady amin'ny fihanaky ny areti-mandringana.
Mino ny Ben'ny tanàna fa aorian'ny fandefasana ny volavolan-dalàna dia hialana sasatra any amin'ny faritanin'i Chon Buri, anisan'izany i Pattaya.
Tonga any Thailand avy any Chine ny fandefasana vaksiny voalohany amin'ity herinandro ity, ary i Chon Buri no ho isan'ireo faritany voalohany nandray azy ireo, hoy ny fanamafisan'ny Ben'ny tanàna.
Tiany ny hanaovana vaksiny ny olona, ​​ny mpandraharaha ary ny mpiasa rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany na inona na inona mponina eo an-toerana na avy any ivelan'ny faritany ka ny tanànan'i Pattaya dia azo tendrena ho "quarantine area".
Manantena Andriamatoa Sonthaya fa izany dia hampiorina ny fahatokisan'ny olona eo an-toerana sy ny mpitsidika ary any Pattaya ho toerana fizahan-tany.